अमेजनले टिकटक डिलिट गर्न भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई पठाएको ईमेल नै 'इरर' ! - Tech News Nepal Tech News Nepal
एनसेलले ल्यायो नयाँ वाईफाई सिम, ४३० रुपैयाँमा ५०
शनिबार, असार २७, २०७७ १९:५९
आखिर को हुन् 'विनोद', कसरी आए सामाजिक सञ्जालको
हाम्रो कीबोर्डमा बोलेकै भरमा नेपाली टाइप हुने फिचर,
साओमीले सार्वजनिक गर्‍यो विश्वकै पहिलो पारदर्शी टेलिभिजन
प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने दिशामा यसरी धकेलिंदैछ नेपालको
अडियो समेत जूम गर्न मिल्ने रेड्मी के थर्टी
कुन सेवा प्रदायकको एफटीटीएच इन्टरनेट सस्तो ?
रेड्मी नोट नाइन प्रो म्याक्स नेपालमा, यस्तो छ
प्रभुले सुरु गर्‍यो इन्टरनेट सेवा, सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय
अमेजनले टिकटक डिलिट गर्न भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई पठाएको ईमेल नै ‘इरर’ !
अमेजन ईमेल एक्सेस गर्न प्रयोग हुने मोबाइल डिभाइसबाट दिन ढल्किनु अगावै टिकटक एप डिलिट गर्न भन्दै अमेजनले शुक्रबार आफ्ना कर्मचारीहरुलाई एउटा ईमेल पठायो । जसमा कुनै विशेष कारण नखुलाइए पनि ‘सेक्युरिटी रिस्क’ रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसको पाँच घण्टा पछि अमेजनले मिडियालाई उक्त ईमेल मिस्टेक (गल्ती) भएको बताएको छ । शुक्रबार मद्यान्ह अमेजनले पठाएको ईमेलमा अमेरिकामा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई टिकटक एप डिलिट नगरेको खण्डमा आफ्नो ईमेलको पहुँच गुमाउने बताएको थियो । त्यसको केही घण्टामै सोही प्रकृतिको ईमेल युरोपमा कार्यरत कर्मचारीले समेत प्राप्त गरेका थिए ।
ईमेलमा भनिएको थियो, ‘सुरक्षा जोखिमका कारण अमेजन ईमेल एक्सेस गर्ने मोबाइल डिभाइसमा टिकटक एपलाई अनुमति दिन बन्द गरिएको छ । यदि तपाईंको डिभाइसमा टिकटक एप छ भने अमेजन ईमेलमा पहुँच बनाइराख्न १० जुनभित्र त्यसलाई रमुभ गर्नुहोला । तर तपाईंको अमेजन ल्यापटप ब्राउजरबाट भने टिकटक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।’
अमेजनले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कार्यालयको ईमेलको पहुँच गुम्ने जोखिम आउन नदिन नियमित रुपमा निश्चित अवधिभित्र सफ्टवेयर अपडेट गर्न भन्दै आएको थियो । तर एक दिनभन्दा थोरै समयको मौका मात्र दिइनुलाई एकदमै अस्वभाविक रुपमा लिइएको थियो । जसमा टिकटकप्रति अमेजन सेक्युरिटीको गम्भीर सरोकार रहेको बताइएको थियो ।
तर यो कथामा रोचक मोड त्यतिखेर आयो, साँझको समयमा जब अमेजनका प्रवक्ताले उक्त ईमेल त्रुटिपूर्ण रुपमा गएको भन्दै ईमेल गरे । जसमा भनिएको थियो, ‘आज बिहान त्रुटिका कारण हाम्रा केही कर्मचारीलाई एउटा ईमेल गएको थियो । अहिलेसम्म टिकटकसँग सम्बन्धित हाम्रो नीतिमा कुनै पनि किसिमको बदलाव आएको छैन ।’
यस विषयमा अमेजनका प्रवक्ताले थप विस्तृत रुपमा केही पनि खुलाएका छैनन् र स्टेटमेन्ट माथि उठाइएका प्रश्नको जवाफ समेत दिएका छैनन् ।
टिकटकको स्वामित्व बाइट डान्ससँग रहेको छ, जुन चीनको बेइजिङमा आधारित कम्पनी हो । अमेरिकाको लस एञ्जल्समा समेत कार्यालय रहेको टिकटकले डिज्नेका पूर्व प्रशासक केभिन मेयरलाई गत मे महिनामा नयाँ सीईओको रुपमा नियुक्त गरेको थियो ।
बिहीबार वाल स्ट्रीट जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टमा टिकटकले चीनसँग दूरी कायम गर्नेगरी कर्पोरेट परिवर्तनको निर्णय लिने विषयमा विचार गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । जसमा आफ्नो हेडक्वार्टर नै अमेरिकामा स्थानान्तरण गर्ने र बाइटडान्सबाट पृथक बोर्ड सिर्जना गर्ने विषय समेत रहेका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा टिकटकको डाउनलोड दुई अर्ब ३० करोड हाराहारी पुगेको छ । सेन्सर टावरले भर्खरै प्रकाशित गरेको एक रिपोर्ट अनुसार अमेरिकामा मात्र टिकटकको डाउनलोड १८ करोड ५३ लाख रहेको छ । जुन टिकटकको कूल डाउनलोडको ८.२ प्रतिशत हो ।
ट्रम्प प्रशासनले लगातार रुपमा चिनियाँ प्रविधि कम्पनी खासगरी ह्वावेको विरुद्धमा अनेक आवाज उठाउँदै आएको छ । जसमा उसको मूख्य सरोकार आक्रामक रुपमा भइरहेको प्रयोगकर्ताको डेटा संकलनमा केन्द्रीत छ ।
अमेजनको प्रतिबन्ध लगत्तै शुक्रबार नै टिकटकले एक स्टेटमेन्ट जारी गरेको थियो । जसमा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकका लागि सबैभन्दा मूख्य महत्वको विषय भएको उल्लेख छ । जसमा टिकटकले उल्लेख गरेको छ, ‘हामी प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई सम्मान गर्ने कुरामा पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध छौं ।
अमेजनले आफ्ना कर्मचारीलाई ईमेल पठाउनु अगाडि हामीसँग कुनै किसिमको संवाद गरेको छैन र हामीले अहिलेसम्म पनि उनीहरुको सरोकारलाई बुझ्न सकेका छैनौं । हामी छलफल तथा सम्वादका लागि उनीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं ।
हाम्रो समुदायमा उनीहरुको टिमको सहभागीतालाई निरन्तरता दिने सवालमा कुनै किसिमको समस्या रहेको खण्डमा त्यसलाई समेत हामी सम्बोधन गर्न तयार छौं । हामीलाई गर्व छ, किन कि अमेजनका कर्मचारी र यो महामारीको समयमा फ्रण्टलाइनमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्ति सहित दशौं लाख अमेरिकीहरु मनोरञ्जन, उत्प्रेरणा र सम्पर्कका लागि टिकटकमा आएका छन् ।’
हाम्रो कीबोर्डमा बोलेकै भरमा नेपाली टाइप हुने फिचर, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
काठमाडौं । ‘हाम्रो पात्रो’ले बोलेरै टाइप गर्न सकिने गरी ‘हाम्राे नेपाली कीबोर्ड’ एपको नयाँ संस्करण
विश्वबजारका उत्कृष्ट कम्पनीहरुको भिडमा ह्वावेको स्थान कति ?
काठमाडौं । ह्वावेले सन् २०२० को फर्च्यून ग्लोबल ५०० सूचीमा ४९औं स्थान हासिल गरेको छ
नेपालमै बनेको कोरोनाको ज्वरो नाप्ने थर्मोग्राफिक क्यामेरा एनएचआरसीबाट प्रमाणीत
काठमाडौं । नेपालको प्रविधि क्षेत्रका नामी जुम्ल्याहा दाजुभाइ राम लक्ष्मण रिमालले विकास गरेको कोरोनाको ज्वरो
फर्च्यून ग्लोबल ५०० : मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको छलाङ
काठमाडाैं । भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले नयाँ किर्तिमान बनाएको छ । उनकाे
आखिर को हुन् ‘विनोद’, कसरी आए सामाजिक सञ्जालको ट्रेण्डिङमा ?
प्रभुले सुरु गर्‍यो इन्टरनेट सेवा, सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिने
कर्णालीको दुर्गम भेगमा इन्टरनेट पुर्‍याएको वर्ल्डलिङ्कलाई कोलम्बियन अवार्ड
‘हल्ट प्राइज’ प्रतियोगिताको तयारी सुरु, कस्ता विद्यार्थीले भाग लिन पाउँछन् ?
विश्वमै फस्टाइरहेको ई-कमर्स नेपालमा चाहिँ किन पछाडि ?
प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने दिशामा यसरी धकेलिंदैछ नेपालको मोबाइल सेवा